Habka samaynta cilada ka mid noqoshada ee jibitaanka epc | Yingyi
1 Cilladaha ku darida ee tuurista epc
Cilladaha ka mid noqoshada ee shubista epc waa mid aad u badan. Cilladaha ku darida ee shubista epc waxay inta badan si weyn u yareeyaan sifooyinka wax shubista. Isla mar ahaantaana, sababta oo ah qaabka aan joogtada ahayn ee ka mid noqoshada, waxay keeni kartaa dildilaacyo ama xitaa dildilaaca tuurista inta lagu jiro adeegga. Cilladaha ka mid ahaanshaha ma aha oo kaliya inay yareeyaan guryaha wax lagu shubo, laakiin sidoo kale waxay hagaajiyaan adkaanta deegaanka ee shubista sababtoo ah cilladaha dusha sare, taas oo si sahlan u horseedi karta dusha sare ee mashiinka qallafsan, waxay saameeyaan waxtarka goynta iyo dhaawaca qalabka. Cilladaha ku darida ee shubista epc guud ahaan waa kooxo aan joogto ahayn oo leh cufnaanta ka mid noqoshada aan sinnayn, oo sidoo kale loo yaqaanno porosity slag.
1.1 Qaabka cilladaha ka mid noqoshada tuurista epc
Cilladaha ka mid noqoshada ee shubista epc waa slag, porosity slag iyo ka mid noqoshada ciidda. Qaabka cilladuhu inta badan waa kala duwan yihiin, cidhifka qaabku waa mid aan caadi ahayn, cabbirku wuu ka duwan yahay, qaybinta koox-kooxeedka, daloolada dhirbaaxada iyo daloolada ayaa guud ahaan madow iyo cawl, midabku waa midabo kala duwan. Waxaa jira walxo budada ah oo ku jira godka cilladaysan, ama birta dareeraha ah ee dareeraha ah, ama hadhaaga adag ee ka soo baxa pyrolysis ee walxaha la midka ah, ama rinjiga walxaha budada ah ee aan caadiga ahayn ama caadiga ah.
1.2 Ka mid noqoshada qaybaha u nugul ee lumay shubista caaryada
Ku darida tuurista caaryada luntay way fududahay in la sameeyo, waxaana jira xeerar gaar ah iyadoo loo eegayo qaab dhismeedka shubista kala duwan, samaynta caaryada, farsamada wax soo saarka iyo xaaladaha. Sababta samaynta waxay la xiriirtaa maadada hadhaaga ee birta dareeraha ah, habka shubanka cadaadiska xun, xaaladda socodka birta dareeraha ah iyo habka adkeynta ee tuurista. Duubista birta dhuuban ee leh caabbinta kulaylka, xidho caabbinta iyo iska caabinta daxalka, cilladaha dalool ee porosity ama slag way fududahay inay dhacaan, badi qaybaha ku xidhan albaabka ama kor u kaca. Qaybaha ku xidhan habka shubista shubista, socodka muddo dheer, si loo ilaaliyo wakhtiga kulaylku waa dheer yahay, birta dareeraha ah si ay u tuurto kulaylka alaabta, qayb dhalaalaysa walxaha, nuugaan gaas badan birta dareeraha ah iyo ku darida iyadoo la xannibay raasamaal, qaboojinta birta dhalaalaysa iyo adkaanshaha adkaynaya, fududahay in la keeno qaybahan ka dib qaboojinta dalool foomka adke, porosity yaraaday, slag cilladaha isku dhafan.
2 Habka buuxinta tuurista dhinta ee luntay
Cilladaha tuurista ayaa la sameeyay wakhtiga shubista buuxinta iyo habka adkaynta. Guud ahaan, wakhtiga buuxinta shubista yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waa dhawr ilbiriqsi oo kaliya, in ka badan toban ilbiriqsi ama tobanaan ilbiriqsi, iyo wakhtiga buuxinta shubista waaweyn sidoo kale waxa lagu dhammeeyaa dhawr daqiiqo gudahood. Ka duwan shubista daloolka caadiga ah, gaar ahaan buuxinta caaryada ee shubista epc waa sababta ugu weyn ee samaynta cillad ku darida.
2.1 Buuxinta foomka shubista epc
Ku saabsan habka buuxinta birta dareeraha ah ee xumbo tuurista, dareeraha buuxinta birta, laga bilaabo albaabka ilaa shubka, ka dib markii "daloosha" taageere birta ay sameeyaan soohdin hore, iyadoo ay saameynayso cuf-isjiidadka, biraha dareeraha ah ee buuxinaya soohdinta hoos u dhaca, laakiin guud ahaan isbeddelku wuxuu ku sii socdaa jihada ka fog albaabka, ilaa "daloosha" la buuxiyo. Qaabka xadka ee xiriirka ka dhexeeya birta dareeraha ah iyo qaabka waxay la xiriirtaa heerkulka birta dareeraha ah, sifooyinka walxaha qaabka iyo xawaaraha buuxinta. Haddii heerkulka birta dareeraha ah uu sarreeyo, cufnaanta qaabku waa yar yahay xawaaraha buuxintuna waa dhakhso, xawaaraha guud ee horumarinta biraha dareeraha ah waa dhakhso. Aluminium aluminium ah oo aan lahayn cadaadis taban oo ku shubaya, isdhexgalka u dhexeeya birta dareeraha ah iyo qaabka waxaa loo qaybin karaa afar nooc: qaabka xiriirka, qaabka nadiifinta, qaabka burburka iyo qaabka ka qaybgalka.
Habka wax soo saarka ee shubista caaryada lumay, caaryada ciidda qallalan ayaa lagu adkeynayaa iyadoo la adeegsanayo cadaadis taban oo ku saabsan caaryada ciidda qalalan inta lagu jiro habka shubista, si caaryada u leedahay awood ku filan iyo qallafsanaan si ay uga hortagto saameynta iyo qulqulka biraha dareeraha ah, si si loo hubiyo daacadnimada iyo waxtarka caaryada ee dhammaan geeddi-socodka shubista iyo adkeynta, iyo helitaanka qaab-dhismeedka dhammaystiran ee shubista. Cadaadiska taban wuxuu u oggolaanayaa dhejinta daawaha madow in lagu tuuro qaab lumay. Caaryada ciidda engegan waxay leedahay xoog iyo qallafsanaan ku filan si ay ugu oggolaato habka shubista in uu sii socdo iyada oo aan la kordhin dhererka sanduuqa ciidda.
3 Isha ka mid noqoshada birta dareeraha ah
Ku darida iyo gaasta ilaha birta dareeraha ah waxaa ka mid ah dhinacyo dhowr ah, sida muuqaalka gaaska haraaga alaabta pyrolysis iyo gaaska, habka dhalaalidda biraha dareeraha ah ee saxarka waa iyo gaaska, iyo saxarka waxaa lagu sameeyay oksaydh of oxide dareere ah, waxaa jira gaasyo gaar ah. heerkul sare oo dareere bir ah si ay u milmaan, iyo burburka u gala godka xidhan “, iwm.
4 Siyaabaha loo yareeyo ku darida luminta dhintaan tuurista
4.1 Yaree ku darida asalka ah ee birta dareeraha ah
Yaraynta ku darida birta dareeraha ah ka hor inta aan la shubin ayaa ah habka ugu muhiimsan ee lagu dhimayo ku darida qaybaha birta shubka. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu nadiifiyo birta dareeraha ah. Nadiifiyaha dareeraha birta ah ayaa la isticmaali karaa, taas oo ah, alaabta ururinta slag ayaa la isticmaali karaa. Ku darida walxaha yaryar ayaa lagu dhejin karaa qaybaha waaweyn ee ka mid noqoshada iyada oo lagu tiirsan yahay xayeysiiska ka mid noqoshada si ay u sameeyaan qaybo ka mid ah qayb weyn, taas oo faa'iido u leh si loo hagaajiyo xaaladaha firfircoon ee sabbeynaya.
4.2 tillaabooyinka habraaca waa in la qaadaa si loo yareeyo ku darida dareeraha birta iyo xoojinta ka saarista ka mid noqoshada
(1) Naqshad macquul ah oo ku shubaya nidaamka riser: inta suurtogalka ah in la isticmaalo wax ka yar hal sanduuq oo shub ah, inta suurtogalka ah si loo yareeyo wakhtiga dareeraha birta ee nidaamka shubka, taas oo ah, in la yareeyo ama la joojiyo orodyahanka; Ku shubista badan ee hal sanduuq ayaa si lama filaan ah ka dhigi doonta nidaamka shubista mid aad u dheer. Marka dareeraha birta ahi uu dhex maro nidaamka shubanka, way fududahay in la soo saaro qallafsanaan iyo qulqulaya kanaalka qaybta badan ee leexinta iyo isbeddelka ee nidaamka shubanka, taas oo yaraynaysa heerkulka dareeraha birta, waxay keenaysaa ogsijiinta dareeraha birta, ku xoq darbiga dhinac ee barafka oo kordhiya ku darida asalka ah ee dareeraha birta ah.
(2) Hoos u dhigista ku haboon ee cadaadiska taban: cadaadiska taban waa sabab muhiim ah oo kordhinaysa qaska ay keento buuxinta dareeraha birta. Rabshadaha sii kordhaya waxay sababaan birta dhalaalaysa si ay u dhaqdo nidaamka gating iyo gidaarka "daloosha", taas oo keenaysa soofid iyo samaynta wareegyada qulqulka kuwaas oo si fudud ugu lug leh isku-darka iyo gaaska.
4.3 Ka ilaali qashinka dibadda inay soo galaan godka
(1) muuqaalka "dalool" iyo shaabad ciid qalalan: shubista muuqaalka nidaamka iyo muuqaalka tuurista iyo ciidda qalalan ee u dhexeeya shaabaddii ma fududa in la keeno ciid qalalan "daloosha", xiriddu waxay inta badan ku xiran tahay daahan, waxqabadka daahan si loo buuxiyo shuruudaha , dhumucdiisuna lebbiska, gaar ahaan muuqaalka geeska gudaha, si looga hortago daahan urursan oo aad u qaro weyn oo ay keento dildilaac ama dhicis.
(2) la dhimo kala-goysyada isku xidhka qaabka: godadka isku xidhka qaabka oo aad u badan, si sahlan loo sameeyo isbeddel badan oo ku yimaadda xadiga xabagta ee farqiga loo isticmaalo, taasoo keenta kala-goysyada xabagta convex ama concave.
(3) sida ugu fog ee suurtogalka ah si aad u isticmaasho xumbo-xumaynta muuqaalka wanaagsan ee qaabaynta muuqaalka iyo qaabka nidaamka tuurista: haddii sababtoo ah dufcada wax soo saarka kaliya waxay isticmaali kartaa muuqaalka goynta saxanka, muuqaalka dusha sare waa in sidoo kale si habboon loo daaweeyaa, la nadiifiyaa oo nadiif ah, marka loo baahdo. , oo leh koollada buuxinta si loo simo godadka iyo godadka gudaha.
Waqtiga boostada: Seb-14-2021